MDC 99 yaVaSikhala Yobatana neMDC yaVaTsvangirai
Kurume 13, 2014
HARARE — Vaimbove mumiriri we St Mary's mudare reparamende vazivisa kuti vapwanya bato ravo re MDC99 vachibatana ne MDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda webato ravo pa Harvest House, Va Tsvangirai vazivisa kuti Va Sikhala pamwe chete naVa Joubert Mudzumwe, avo vaimbova sachigaro we MDC yaitungamirwa naVa Arthur Mutambara, vadzoka mubato ravo kuti vashande pamwe chete.
Va Sikhala naVa Mudzumwe ndevamwe vevakasiyana naVa Tsvangirai pakatsemuka MDC nepakati muna 2005 nepamusana pekusawirirana panyaya yekupinda musarudzo dzedare reseneti.
Va Sikhala vanoti vawona zvakakodzera kuti vashande naVa Tsvangirai kuti varwire hutongi hwejekerere munyika vachiti humbimbindoga haukwanise kubvisa hutongi hweudzvanyariri hwavanoti huri kuitwa ne Zanu PF.
Mashoko aVa Sikhala atsinhirwawo naVa Mudzumwe avo vanove mumwe aivepo pakawumbwa MDC muna 1999.
Va Mudzumwe vati vane tarisiro yekuti vamwe vavanga vachishanda navo ku MDC-M vachauyawo zvakare nehuwandu hwavo kuti vazoshanda pamwe naVa Tsvangirai.
Va Tsvangirai vati vari kuedza kutaura nevamwe vatungamiri vemapato madiki akaita se MDC inotungamirwa naVa Welshman Ncube, Va Simba Makoni vanotungamira bato re Mavambo Kusile Dawn pamwe naVa Lovemore Madhuku vebato richangoumbwa re National Constitutional Assembly, NCA, kuti vashande vese mukuedza kubvisa bato re Zanu PF muhutongi.
Kunyange hazvo Va Ncube vakabuda mumapepanhau vachiti havazofi vakashanda pamwe chete na Va Tsvangirai, Va Tsvangirai vakurudzira Va Ncube kuti vatarise ramangwana kubudikidza nekukoshesa zvido zveveruzhinji vanopikisana nehutongi hwaVa Robert Mugabe nebato ravo re Zanu PF.
Panyaya yekusawirirana kwavo nevamwe vavo mu MDC-T nevamwe vakaita semunyori mukuru webato iri, Va Tendai Biti, naVa Elton Mangoma avo vakambomiswa basa semutevedzeri wemubati wehomwe mubato iri, Va Tsvangirai vati hapana imba isingawanike bopoto vakati izvi zvichagadziriswa nekufamba kwenguva.
Vati nyaya iri kutaurwa naVa Mangoma nevamwe vavo vari kuda kuti mubato ravo muve nehutungamiri hutsva haisi nyaya ingaita kuti vanhu vaputse chirongo vasvika.
Va Mangoma vari kupomerwa mhosva yekuvhiyira kadembo pavazhinji kubudikidza nekutaura kwavakaita nevemapepenhau vachikurudzira kuti Va Tsvangirai vabve pachigaro kunyange hazvo komiti yepamusoro-soro ye MDC-T yakange yabuda nechisungo chekuti nyaya iyi inofanirwa kuzeyerwa mukati mebato chete.
Zvichakadai, VaSikhala vakurudzira Va Tsvangirai kuti varegerere vamwe vavo vavasiri kuwirirana kuti vawanikwe vachishanda navo zvakanaka vakabatana.
Va Sikhala vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti vachange vari kumusangano uchaitwa na VaTsvangirai ku Bulawayo neMugovera uye vati Va Mugabe nevamwe vavo vanotofanira kusunga dzisimbe sezvo vachiti vadzoka vave nesimba rakanyanyisa rekurwisana nehutongi hweudzvanyiriri.
Vatiwo vari kuda sarudzo nechimbichimbi sezvo vachiti sarudzo dziri pachena ndidzo dzega dzinopedza nyaya yekushayikwa kwemabasa pamwe neyekuti ruzhinji rwe Zimbabwe rwusanhonge svosve nemuromo vashoma varivo vega vanozvimba matumbu nekuguta.
Hatina kukwanisa kutaura naVa Ncube pamwe naVa Makoni kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa naVa Tsvangirai izvi kuedza kusimbaradza mikana yavo yekukunda ZANU PF musarudzo dzinotevera zvichitevera kukundwa kwavakaitwa musarudzo dzegore rapera.